Raha ny fanazavan’ny mpitsabo tsy miankina iray dia miseho amin’ny alalan’ny fanaviana io aretina io. Mitsory ranon-delo ilay olona, mahamay be ny lohany, manakotsako ny vanin-taolany ary mety hikohoka mihitsy izy. Mety hitsory ihany koa ny ranomasony na menabe ilay maso izay fantatra fa mety hahafaty mihitsy raha tonga any amin’ny atidoha. Mety hiteraka tsiranoka any amin’ny atidoha mantsy ilay aretina, mety hampivalana sy mahavoa ny pnemonia ihany koa raha tsy voatsabo. Na izany aza, tsy ilay kitrotro loatra no mahafaty fa ireo karazan’aretina manafika ilay marary raha vantany vao midina ny hery fiarovana ao anatiny. Ny fanaovana vaksiny no vahaolana tsara indrindra. Maimaimpoana ny fanaovana izany eny anivon’ireo hopitalim-panjakana toy ny CSB. Afaka mandray an-tanana ireo marary ihany koa izy ireo. Ilaina koa ny fitandroana hatrany ny fahadiovana ary ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana feno hery sy be otrikaina. Ho an’ity dokotera tsy miankina iray ity dia fantatra fa manomboka amin’ny 9 ora maraina ka hatramin’ny 7 ora sy sasany hariva ny tenany tsy mitsahatra ny mandray marary isan’andro. Ankoatra ireo voan’ny kitrotro dia betsaka ihany koa ireo voan’ny tazo.